Career News and Info जेठ १६, २०७४Career News and Info जेठ १५, २०७४Career News and Info जेठ १४, २०७४Career News and Info जेठ १२, २०७४Career News and Info जेठ ११, २०७४Public Service Card भनेको के हो ?Career News and Info जेठ १०, २०७४Career News and Info जेठ ९, २०७४अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी जानकारीCareer News and Info जेठ ८, २०७४आईपीएल (Indian Premier League) सम्बन्धी जानकारीवित्तीय स्वायत्तताका अभ्यासभन्सारमा Pyramiding Effect भनेको के हो ?सूचना तथा संचारको हकबीच के फरक छ ?Career News and Info जेठ ७, २०७४ View More Our Publications
लोकसेवा गुरु खरिदार प्रश्नोत्तर २०७३
यस पुस्तकमा शाखा अधिकृतको नयाँ पाठ्यक्रम बमोजिम द्वितीय र तृतीय पत्रको पाठ्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ । चौधौं योजना, बजेट बक्तब्य २०७३।०७४, मौद्रिक नीति २०७३।०७४, आर्थिक सर्भेक्षण आदिका आधारमा पूर्णत परिमार्जित रुपमा यो चौथो संस्करण तयार पारिएको छ ।
परिचित लेखक यदु नेपालद्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित नायव सुब्बा प्रथम पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित भै तयार पारिएको छ । पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेको यो पुस्तकलाई करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. ले प्रकाशन गरेको छ । यस पुस्तकमा विगतमा लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिसकिएका प्रश्नहरुलाई प्रस्तुत गर्नुका अलावा कुन पाठबाट कस्ता कस्ता प्रश्न आउन सक्छन् भनी पहिचान गरिएको र गर्न सिकाइएको छ । के पढ्नु पर्छ मात्र होइन के पढ्न आवश्यक छैन भन्ने ज्ञान दिलाउन, थोरै समयमा धेरै जानकारी लिन यस पुस्तकले सहयोग गर्नेछ । यस पुस्तकमा चौधौं योजना, बजेट बक्तब्य २०७३।०७४, आर्थिक सर्भेक्षण २०७२।०७३ आदिको आधारमा बिषयबस्तुहरु पूर्ण रुपमा अद्याबधिक गरि प्रस्तुत गरिएको छ । नायब सुब्बा द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम अनुसार पूर्ण रुपमा तयार पारिएको यो पुस्तक लेखक यदु नेपालले लेख्नु भएको हो । पाठ्य बिषयबस्तु, लेखन कला र सफलताका शर्तहरु समेटिएको पुस्तक नायव सुब्बाको यो पुस्तकमा,
A. के पढ्ने, कति पढ्ने र कसरी पढ्ने जानकारी दिइएको छ । B. यसमा के लेख्ने, कसरी लेख्ने र कति लेख्ने जानकारी गराइएको छ । C. लोक सेवा अध्ययनको क्रममा आउन सक्ने जिज्ञासालाई समाधान गर्न खोजिएको छ । D.२०७३ साल कार्तिक १ गते सम्मको सूचना तथा तथ्यांकको आधारमा पुस्तकलाई अद्याबधिक गरिएको छ ।
E. हालसम्म सोधिएका प्रश्नहरुलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उपलब्ध हुने समय सीमा भित्रै हल गर्न सक्ने गरी समाधान गरिएको छ । F. नायव सुब्बा लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने लक्ष्य स्पष्टता, मानसिक तयारी र प्राबिधिक तयारीका बिषयहरुलाई सफलता रहस्यको रुपमा अलग्गै स्थान दिइएको छ ।
एक पटक आफै परीक्षण गरी हेरौं । तपाईंको लगानी करीयर निर्माणका लागि उपयोगी हुनेछ ।
हालसम्म सोधिएका र सम्भावित प्रश्नहरुको समाधानसहित शाखा 'अधिकृत प्रश्नोत्तर P.I.S. 2073' सुरेश अधिकारी, यदु नेपाल र रुपनारायण खतिवडाद्वारा लिखित । शाखा अधिकृतको नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको शुरु वर्षदेखि २०७३ सम्मका प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्रका प्रश्नहरु तथा पाठ्यक्रम समावेश गरिएको मूल्य रु. ५०/- मात्र । शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार प्रथमपत्रका अतिरिक्त बिभिन्न निकायको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि अत्यान्तै उपयोगी ।
लोकसेवा प्राक्टिस पेपर २०७३ Series -2शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार प्रथमपत्रका अतिरिक्त बिभिन्न निकायको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि अत्यान्तै उपयोगी ।
लोकसेवा प्राक्टिस पेपर २०७३ Series - 1
Pocket Book(समसामयिक बस्तुगत)
गोरखा भूकम्प २०७२ (नालीबेली)